#TimeToTravel: A Guide To Safe Travel Na-ejighị n'aka 2021 - Ime Ụlọ
#TimeToTravel: A Guide To Safe Travel Na-ejighị n'aka 2021
Timetotravel Guide Safe Travel Uncertain 2021
Nke a bụ ihe nduzi nwere ike ime iji mee ka ahụmịhe njem gị dị mma n'oge ọrịa Covid-19.
Site na mgbochi ọrịa na-ebelata, anyị ga-agarịrị njem karịa 2021 karịa ka anyị mere n'afọ gara aga. Ka anyị na-arụ ọrụ na-arịwanye elu ma gbanahụ na obere njem iji mebie monotony nke ịnọ n'ụlọ ogologo oge, enwere ihe ole na ole anyị kwesịrị iburu n'uche iji hụ na anyị na ndị ọzọ nwere ahụmịhe njem dị mma.
A bụ ihe a kemfe ndu na-anọ mma ka ị na-aga ịgagharị ụwa (ma ọ bụ obodo nke gị!)
Buru n'uche ebe ị ga-aga: Otu esi aghọrọ ebe nchekwa
Ọ bụ ezie na ọnọdụ ịnọ n'ụlọ emeela ka anyị niile nwee ike izu ike ma chọọ ezumike, ọ dị mkpa na anyị maara ebe njem anyị ga-aga. Họrọ ebe ndị zoro ezo na-adịkarị, ma ọ bụ nwee oge-oge n'oge a, iji zere onwe gị pụọ igwe mmadụ achọghị. Zere ememe, juru n'ọnụ ahịa na ime ụlọ ebe dị ka ihe ngosi nka na ihe nkiri. Ọ bụrụ na ị ga-aga ebe ndị a, jiri ihe nkpuchi dabara nke ọma, gbalịa idobe ebe dị mma, ma na-edobe aka gị oge niile. Banye n’èzí nke na-enweta ọtụtụ ogige ntụrụndụ ikuku, ụzọ ụkwụ na ụsọ osimiri.
Nwee Ihe Ndị A Mgbe Niile: A Ngwaọrụ Njem Ndị Nwere Ahụhụ Na-efe efe
Gooddị akpụkpọ ụkwụ dị mma, uwe dị mma na ihe nkpuchi anya bụ ihe ndị dị mkpa na njem tupu oge ahụ mana nke ahụ agbasawanye gụnyere ịgụnye ihe ndị ọzọ dị mkpa nke anyị enweghị ike ịga njem na-enweghị n'oge ọrịa na-efe efe. Atọ n'Ime Otu dị nsọ nke nkpuchi, sanitisers na wipes bụ ezigbo enyi gị.
Adịla na-apụtaghị aka nkpuchi nkpuchi dabara gị nke ọma. Ọtụtụ ndị nwere ezi uche na-eyi ma ọ bụ ndị na-arịa ọrịa masks ma ọ bụ na ha eyighị ha nke ọma. Na-ebu ụma mgbe niile!
Uwe bụ nhọrọ, ma ahapụla aka aka ahụ. Ozugbo ị metụrụ aka aka, oghere aka gị ga-emerụ dịka aka gị, yabụ kama gbalịa ịsacha aka gị ugboro ugboro (mgbe ọ bụla i nwere ike!) Ma jiri aka na-eme ihe. N'akpa uwe-enyi na enyi ndị dị ukwuu mgbe ị na-aga.
Buru abụba abụba nke na-ehichapụ disinfectant iji dozie ihu ọha ọ bụla ị nwere ike ịkpọtụrụ, dịka oche ụgbọelu na ụzọ ụzọ.
Ọta ihu nwere ike iyi obere ihe, mana, ọ bụrụ na ị bụ onye ọ na-amasị ịpịpụ igbe niile, ọ bụ ihe mgbakwunye agbakwunyere na ngwa agha gị. Yiri ya na njem ma ọ bụ mgbe ị nọ n’ebe ndị mmadụ juputara ebe niile.
Wunye obere ọgwụ na-ekpuchi ntọala niile. A ga-enwerịrị temometa, ọgwụ ọkụ na ọgwụ ọkụ yana mbadamba vitamin. Ọ bụ ezie na ejedebeghị na njem na-efe efe, ngwa ahụike bụ ihe eji enyere ndụ aka ọkachasị n'oge ndị a, na oge ịda ọrịa.
Jiri nlezianya Họrọ omlọ Gị: Ebe Ihi ụra Nke Ọma
egwuregwu igwu egwuregwu na ndị okenye
Nọ n’ụlọ na-ebelata mmekọrịta gị na ndị ọzọ bụ ihe kachasị mma. Onwere ihe kpatara ndi ulo na ndi ozo ji di nma karie hotels(Njikọ ibe Priyaja)ka ha na-enye nzuzo na nzuzo nke nnukwu ụlọ nkwari akụ na-enweghị ike. Andalọ ndị nwere onwe ha na ụlọ ezumike nke onwe ha na kichin ha na ime ụlọ ịsa ahụ bụ nhọrọ ka mma karịa ime ụlọ ụlọ oriri na ọ hostụ .ụ. Ekwesighi ka ezere ụlọ nkwari akụ kpamkpam - chọọ ụlọ nkwari akụ na ebe obibi na-agbaso ụkpụrụ nduzi na usoro iwu WHO. Rịọ ntinye na-enweghị isi ma ọkacha mma ime ụlọ nke na -bebeghị ụbọchị ole na ole. Lelee usoro ogbugba ndu nke ebe obibi nke ọma tupu ị banye. Gbaa mbọ hụ na nbanye na nnweta kọntaktị na nnweta ihe ndị ọzọ na-enweghị kọntaktị dị ka ọrụ ụlọ na menus koodu QR. Zere ibuli elu, ụlọ nri n'ime ụlọ na ebe ndị ọzọ n'ime ụlọ nkwari akụ ebe ị nwere ike izute ọtụtụ mmadụ.
Lelee ihe ị na-eri ma na-arinkụ: Otu na ebe ị ga-esi jide ụta
Tụ ọpụpụ ma ọ bụ isi nri nke gị bụ nhọrọ dị nchebe, mana, ọ bụrụ na ị ga-eri nri, buru ihe ole na ole n'uche. Họrọ otu ụlọ oriri na ọ restaurantụ thatụ nke dị ọcha, na-enye ebe a na-anọ n’èzí, na ikuku na ikuku dị mma. Tebụl kwesịrị ịdị anya site na ibe ya, ebe ahụ ekwesịghịkwa ịba ụba. Gbaa mbọ hụ na sava yana ndị ọzọ na-eri nri (mgbe ha anaghị eri nri) niile na-etinye ihe mkpuchi. O di nkpa ikwu, zere oge kacha elu na ihe niile. Ọ bụ ezie na ịkọ nkọ bụ echiche a na-elegharakarị anya na India, nye ndị sava gị na ndị ọrụ ọbịa ọbịa nke ọma, ebe ha na-etinye ndụ ha n'ihe egwu ka anyị wee rie nri anyị na-anụ ụtọ n'ụlọ nri anyị hụrụ n'anya.
N’ụzọ na-atụghị anya ya, iwu ọlaedo maka njem na-adịghị ize ndụ na-agbadata iyi ihe mkpuchi, na-asa aka gị mgbe mgbe, ma na-enwe opekata mpe ụkwụ isii site na ndị ọzọ. Atụmatụ ndị ọzọ na-akwado ma ọ gaghị ebu ibu ma ọ bụrụ na anyị esoghị atọ ndị a. Nke a bụ afọ ọhụrụ na-atọ ụtọ nke njem na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ!
Hụkwa: A ndu na-arụ ọrụ
n'elu Hollywood Hollywood ihunanya
ụdị ntutu ịkpụ ntutu maka nwanyị
nri ndị anaghị eri anụ nke jupụtara na ayodiin
edozi isi maka nwa agbọghọ ihu oval
otu esi eji mkpuchi isi